I-Vista Abril, i-villa eseceleni kolwandle endaweni yokulondoloza imvelo - I-Airbnb
I-Vista Abril, i-villa eseceleni kolwandle endaweni yokulondoloza imvelo
Matutuíne, Maputo, i-Mozambique
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Greg
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Greg izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Indawo yokulala eyi-Luxury 4-side beach etholakala ngaphakathi kwe-Machangulo Nature Reserve ekhethekile neyimfihlo. Ikhelwe ehlathini elihlanzekile elinendunduma enokubukwa okumangalisayo phezu kwetheku lase-Indian Ocean elivikelwe ngokwemvelo e-Ponta Abril, ingekho enye indawo ebonakalayo. Isakhiwo sinezakhiwo ezimbili ezixhunywe ngomgwaqo ohamba ngezinyawo. Isebenza ngokuziphekela. Abasebenzi abahle abahlengikazi abangu-2 banakekela ilondolo, ukuwasha, ukuhlanzwa, ukubekwa kwetafula, njll. Ichibi le-Infinity.
Enye yezindawo ezimbalwa ezikhethekile zikanokusho ngaphakathi kwe-Machangulo Private Nature Reserve enokufinyelela okuqondile kumadrayivu e-safari e-Maputo Special Reserve. Isakhiwo esikhulu sinendawo yokuphumula enkulu kanye nendawo yokudlela evulekile enikeza ukubuka okubanzi phezu kwetheku lase-Indian Ocean elinikeza izindawo zokubhukuda ezivikelekile lapho amagagasi aphansi kanye nendawo engavamile yokuntweza emanzini kodwa esezingeni lomhlaba yabatshuzi.
Ayikho enye indawo eqhele ngamakhilomitha ambalwa, ebekwe endaweni ehlanzekile yehlathi lezindunduma ebheke indawo evikelekile ogwini lolwandle olunezindawo ezisebenzayo zokuzalela izimfudu ezivikelekile nezisengozini.
Abasebenzi ababili abasebenza ngokugcwele balungisa imibhede, babeka amatafula, bahlanze, bawashe ngemva kokudla, bawashe izingubo zezivakashi zansuku zonke, ilondolo yelineni yamasonto onke, amakhushini amagumbi okuhlala namathawula okubhukuda futhi bangasiza nasekulungiseleleni ukudla.
Abasebenzi ababili abasebenza ngokugcwele balungisa imibhede, babeka amatafula, bahlanze, bawashe ngemva kokudla, bawashe izingubo zezivakashi zansuku zonke, ilondolo yelineni yama…